Ukushisa Okushisayo - Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
Ama-Nanoparticles wokusetshenziswa kwe-Thermal Insulation
Thermal ukwahlukanisa indlela nano esobala ezishisayo ukwahlukanisa enamathela:
Amandla emisebe yelanga agxilwe kakhulu ebangeni lobude be-0.2 ~ 2.5 um. Ukusatshalaliswa kwamandla athile kutholakala ngale ndlela elandelayo: isifunda se-uv se-0.2 ~ 0.4 um sibala u-5% wamandla esewonke.Isifunda esibonakalayo singu-0.4 ~ 0.72 um, sibala u-45% wamandla esewonke. ~ 2.5 um, kubalwa u-50% wamandla esewonke.Ngakho-ke, amandla amaningi ku-spectrum yelanga asatshalaliswa ekukhanyeni okubonakalayo nasendaweni yeso lefoni, lapho isifunda esiseduze se-infrared sibanga uhhafu wamandla. unganikeli kumphumela wokubuka. Uma le ngxenye yamandla ivinjelwe ngempumelelo, ingaba nomphumela omuhle wokufaka izinto ezishisayo ngaphandle kokuthinta ukubonakala kweglasi.Ngakho-ke, kuyadingeka ukulungisa into engavikela ukukhanya kwe-infrared futhi iphinde idlulise ukukhanya okubonakalayo.
Ama-nanomaterial amathathu asetshenziswe kahle ekugqokeni okusobala kokushisa okushisayo:
INano ITO (In2O3-SnO2) inokukhanya kokukhanya okubonakalayo okukhanyayo nezakhiwo zesivikelo, futhi iyinto ebonakalayo ebonakalayo yokuvikela ukushisa.I-Indium iyinsimbi engajwayelekile futhi iyinsiza yamasu, ngakho-ke i-indium iyabiza. Ngakho-ke, ekwakhiweni kokufakwa okusobala okushisayo Izinto zokumboza ze-ITO, kuyadingeka ukuqinisa ucwaningo lwenqubo ukunciphisa ukusetshenziswa kwe-indium ngaphansi kwesisekelo sokuqinisekisa umphumela wokufakwa okusobala okushisayo, ukuze kunciphise izindleko zokukhiqiza.
2.INano Cs0.33 WO3
I-Cesium tungsten bronze esobala i-nano thermal insulation coating igqama ekugqokeni okuningi okusobala okushisayo kwe-thermal ngenxa yezimpawu zayo zokuvikela ukushisa ezemvelo neziphezulu, ngokusebenza okuhle kakhulu kwe-thermal okwamanje.
I-Nano ATO antimony doped tin oxide coating inguhlobo lwento ebonakalayo ebonakalayo yokumboza okushisayo enokuhamba okuhle kokukhanya nokufakwa kwe-thermal.I-Nano tin antimony oxide (ATO) iyinto ekahle yokufaka izinto ezishisayo ezinokukhanya okuhle kokukhanya kwempahla ne-infrared barrier property. ukwengeza i-nano ATO kokumbozayo ukwenza okusobala okushisa okushisa kungasombulula ngempumelelo inkinga yokufaka ingilazi yokushisa. Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo, inezinzuzo zenqubo elula nezindleko eziphansi, futhi inenani lesicelo eliphakeme ngokwedlulele kanye nethemba elibanzi lemakethe.